Karman Mutengesi Mitemo
Anotevera ndiwo mamiriro uye mamiriro akasimbiswa neKarman Healthcare sechinodiwa nekufamba kwenguva kuchengetedza iyo unhu uye kuvimbiswa kwekambani yako, vatengesi vedu, vatengesi vedu, nesu.
Kutumira uye Kubata:
Karman Healthcare Inc. ichabhadharira mari yekutumira neyekubata uye ichawedzera kune yako invoice. Ose maodha anotumirwa neyakakodzera sevhisi sevhisi, zvinoenderana nerudzi rweyuniti, huwandu hwakatemerwa uye yakanakisa yekutakura quote.
Kutumira kunze kwema 48 nyika dzinoenderana / kutumirwa kune dzimwe nyika
(ndapota email- orders@karmanhealthcare.com yekutora kana kusimbisa)
Vatengi vatsva vanofanirwa kubhadharisa cheki kana kiredhiti kadhi kudzamara chikwereti chasimbiswa uye mafomu nemamiriro ezvinhu akasainwa ndokudzoserwa kuKarman. Isu tinochengetera kodzero yekuramba chikwereti kana kubvisa mareti echikwereti kumaakaundi akaipa. Mari yekupedzisira inowedzerwa kune mavovoice ese apfuura. Mitemo ndeyemambure mazuva makumi matatu pachikwereti chinobvumidzwa. Mari yekufarira ye30% pamwedzi inoshanda kune ese akapfuura maakaunzi akafanira. Akafa akafanirwa maakaunzi haazokodzere pamwedzi nyanzvi. Muchiitiko chekuti chero mapato echitatu anoshandirwa kutora chero bhezari irimo, mutengi ndiye anoona nezve chero mari yekuunganidza, kusanganisira mubhadharo wegweta, kunyangwe mutongo watanga kana kwete, uye mutengo wese wematare wakakonzerwa.
Dzosera mvumo inofanirwa kuwanikwa pamberi paKarman. Hapana kudzoka kwemhando ipi neipi kunozogamuchirwa mushure memazuva gumi nemana (14) ezuva rekarenda kubva pazuva reinvoice uye kutumirwa kumashure mukati memazuva makumi matatu anotumirwa mitero yakabhadharwa. Midziyo inogamuchirwa yechikwereti pakudzoka ichaiswa pasi pegumi neshanu pakubata / kudzoreredza mutero uye zvese kutakura mhosva dzinofanirwa kubhadharwa kare. Zvekurairwa kuri kudzoserwa kuchinjana muvara, saizi, nezvimwewo mari yekudzoreredza ichadzikiswa kusvika pa5%. tsika-zvigadzirwa zvinhu hazvisi pasi pekudzoka chero zvodini.
Hapana mamiriro ezvinhu kuti zvinhu zvinodzoserwa usati watanga kuwana iyo RMA nhamba (Yakadzoserwa Merchandise Mvumo). Dzosera mvumo nhamba inofanira kumakwa kunze kwebhokisi uye kutumira kuKarman. Mari dzese dzekutakura kusanganisira nzira yekutanga kubva kuKarman kuenda kune vatengi haizopihwe kana kudzoserwa.
Kukuvadza Kwekutakura Zvinodairwa:
Wongorora uye edza zvese zvakatumirwa pakuendesa. Hapana chigadzirwa chine kukuvara / kuremara chichagamuchirwa kumashure mushure memazuva mashanu ekugamuchira. Kuoneka kukuvara uye / kana kushomeka kwemakatoni kunofanirwa kucherechedzwa pane inotakura yekutakura irisiti uye / kana kurongedza runyorwa.
Ndokumbira utarise kune iyo kadhi yewarandi yakanamatira kune chimwe nechimwe chigadzirwa kuti uwane rumwe ruzivo nezvematongerwo enyika nemaitiro. Kugadziriswa kwewaranti kana kutsiva kunofanirwa kuve nemvumo yekutanga kubva kuKarman ine prepaid prepaid. Karman anochengetera kodzero yekuburitsa mamaki ekufona kune chero gadziriso yewarandi inoenderana nemamiriro ezvinhu. Karman haachakumbire kuti vatengi vanyore chigadzirwa chavo online, nevatengesi, kana yose kiredhiti kunyoresa kadhi.
Kana chiito chemumunda kana chiyeuchidzo zvikaitika Karman anozotarisa zvikamu zvakakanganiswa ndokubata mutengesi wako weKarman nemirairo yekugadzirisa. Kunyoreswa kwewaranti kunobatsira uye vachiri kurairwa kuti vaone kuti marekodhi anodzoserwa nekukurumidza nemutengi anoenderana uye nhamba ye serial yezvinhu zvako zvekurapa. Ndatenda nekuzadza.
KARMAN WARARANTI KUNYORISIRA VANOGONESA VAGARI
Makambani anofanirwa kuve nemvumo neKarman Healthcare Inc.kushambadzira zvigadzirwa online kana kuburikidza nekutumirwa katarogu kusimudzira. Panguva ipi neipi Karman Healthcare Inc. ine mvumo yekutorera maricho ekushambadzira kune chero kambani. Kana yadzimwa, kambani inofanirwa kubvisa zvigadzirwa zvese zveKarman pakutenga zvinyorwa sezvo kambani neKarman Healthcare Inc. vachange vasisina hukama hwebhizinesi. Vatengesi vese vanofanirwa kutevedzera yedu MAP (yakashambadzirwa yakashambadzirwa mitengo) mutemo.